DACALADA ADUUNKA:MA ISKU DAAWEYN LAHAYD RAH NOOL OO AAD CUNTO AMA DABAQALOOC (DAAWO SAWIRADA) | Toggaherer's Weblog
Dalka Shiinaha ayaaa waxaa haatan aad looga bartay in dadka ay isku dawayeen xaywaanadka halista oo ay cunan sida Raha, Diinka, Masaska iyo in badan oo xaywaanad halis ah.
Oday 66 jir ah ayaa waxa uu mudoo labaatan sanadood la xanuunsanaa cudur ka hayay dhuunta iyo sidoo kale calool xanuun lakiin maalin baa saaxiibkiis wuxu kula taliyay inuu seddex rah oo nool nool uu cunno sida sawirka aad arkeyso ninka wuu cunay wuxuuna sheegay inuu ku caafimaaday.
Ninkan oo lagu magaacaabo Jiang Musheng ayaa waxa uu sheegay in dawadii ay shaqeysay islmaraakana ay hada ka dib wadi doono,dadka chineseka ah wax dhibato ah lama laha inay cunaan raha ama masaska lakiin waxay cunaan iyadoo la kariyay lakiin ninkani wuxuu tijaabiyay isagoo nool inuu cuno.
Sawirada kale ee aad arkeyso waxaa iyana ay dadku ka dhigteen dawo oo dadka Chineseka ah ay isku dabiibaan tasoo halis weyn ay ka iman karto tusaale ahaan sawirka qofka u dul saaran yahay dib qalooca waa mid ka mid ah cusbitalada waa weyn ee magaalada Beijing oo sidaasi dadka madaxa xanuuno loo daweeyo.
Waxaa jirta odhaah odhaneysa ” dadka chineseka ah waxa ay cunaan wax kasta oo 4 lugood leh marka laga reebo miiska, waxay cunaan waxkasta oo bada ku socda marka laga reebo markabka waxay cunaan wax kasta oo duula marka laga reebo diyaarad”
Waa cajiib iyo amakaag bani aadam sidaan u dhaqma.